Mashandisiro aungaita Anemone: iyo nzira kune Winterboard ye iPhone yako | IPhone nhau
Kana iwe uri kutsvaga kuti uchinje kutaridzika kweye iPhone yako, uye waida a imwe nzira yeWinterboard yezvinyorwa, saka nhasi tinokupa mhinduro kubva paruoko rwaAnemone. Icho chiri nyore kwazvo sarudzo yekumisikidza uye nenhamba hombe yemadhizaini ayo anonyatso kuita kuti iwe uwane akasiyana maficha kana iwe uchinge watove neimwe sarudzo inoshoreka. Ehezve, tisati takuudza iwe kuti yakaiswa sei, isu tinotsanangura izvo zvakaipa zvauri kuzowana.
Anemone uye Winterboard hazviwirirane. Uye izvi chaizvo. Muchokwadi, iyo nguva yaunomisa yekutanga, yechipiri ichanyangarika uye hauchakwanise kuitora. Nechikonzero ichocho, kana iwe wakamboishandisa kare, uye pamusoro pezvose wawakaisa mari mumatimu, ini ndinokurudzira iwe chengetedza zvese nekuita backup ye data usati wafunga kuisa Anemone. Uye neyambiro iyi, isu tobva tatsanangura maitiro ekuenderera nhanho inotevera nedanho
Maitiro ekuisa uye kushandisa Anemone
Isa kubva kuCydia Anemone. Kana iwe usingakwanise kuiwana, unogona kuwana dura rayo kubva ku iPhone pano: https://anemonetheming.com/repo/
Paunenge iwe waisa uye wadzoreredza, iwe uchaona iyo icon pane yako kumba skrini. Ingotinya pairi kuti uwane chifananidzo chakafanana chaizvo neicho chinoratidzwa mune ino chinyorwa.
Kune madingindira anoenderana kubva kuWinterboard kuenda kuAnemone, kunyangwe iwe uchafanirwa kurodhaunirazve. Kune rimwe divi, kana uchinge wasarudza imwe, mukana weAnemone ndeyekuti inoratidza munguva chaiyo sarudzo dzekumisikidza dzinokutendera kuti ubvumidze kana kudzima mhedzisiro uye, nekudaro, wedzera kugadzirisa madingindira akasarudzwa nemushandisi usingatenderi nekuda kweizvi kufanoona.
Paunenge uchinge uine iwo theme yakamisikidzwa nenzira yaunoda iwe, tinya paApply uye unakirwe neshanduko mune yako terminal.
La hurema hwazvino hweAnemone ndeyekuti nekuda kwekuonekwa kwazvino kwekuparadzwa kwetirongo kweIOS 9 kuchine mashoma madingindira anoenderana, kunyangwe iyi ichave iri nyaya ichagadziriswa nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Mashandisiro aungaita Anemone: iyo nzira kune Winterboard ye iPhone yako
Ini ndinokuchengetera iwe kuti uvandudze Springtomize 3 yeiyo iOS 9.xx
Kwandiri iyo yakanakisa Tweak yezvose. Authentic multipurpose Swiss mauto banga.
Izvo zvave zvichishandira ios 9 kwenguva yakareba, mune ino repo iwe uchaiwana iri repo.hackyouriphone.org
Ndine matambudziko neanemone; Haina kugadzikana 🙁 iyo inokuvadza imwe yenziyo dzandakada iAIR
Pindura kuna mrson7
Chii chinonzi springtomize chine chekuita neWboardboard?
Springtomize inoshanda zvakanaka ios 9.3.3 uye jb
Apple Inoburitsa Yekutanga iPad Pro Chiziviso